Waxaa jira sababo badan oo keeni kara dadka si ay u tirtirto maktabadda Lugood. Sababahaa intooda badan si loo abuuro playlist ah oo abaabul ka mid dhegaysan kartaa.
Aad ee kaabta Lugood Library
Waxaa si weyn lagu talinayaa u user a si ay u abuuraan gurmad ah dugsiga sare ee uu maktabadda tan iyo mid qasan kartaa ilaa habka iyo aakhirka laga badiyay maktabadda oo dhan. Abuurista gurmad ah awood u user a si ay dib ugu shuban file ka dib marka la tirtiro maktabadda.
Uruuriyey ee files
Dooro heesaha oo dhan maktabadda oo wuxuu ku riday gal ah. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad ogaato waxa songs in aad rabto in aad dib u up. Mararka qaarkood user a laga yaabaa in ay adag tahay in la helo isla heeso ama aanay online daabacay iyaga badbaadiyo ka badiyay songs sida. The songs xulay la taageeray kartaa goobo kala duwan sida.
Iibsiga qalab kale
Step1: Riix Music Transfer ee bogga guriga, ka dibna markii qalabka ku xiran doortaan bogga Music iibsiga dooro Import ka Lugood
Step2: Dooro file playlist in aad rabto in aad soo dhoofsadaan ka Lugood aad u dhaqmaan sidii gurmad ah ka dib markii la tirtiro playlist ah. Ka dib markii xulashada aad playlist aad dooran kartaa OK.
Dooro file playlist in aad rabto in aad soo dhoofsadaan ka Lugood aad u dhaqmaan sidii gurmad ah ka dib markii la tirtiro playlist ah. Ka dib markii xulashada aad playlist aad dooran kartaa OK.
Mararka qaar qaladaad dhacdo inta lagu guda jiro wareejinta oo ka mid ah files playlist, faylasha qaar ka mid ah ay gaaraan marka ay jebiyey burburi iyo aan u shaqayn karaa sida ay yihiin. Tan waxaa laga yaabaa niyad jab qof looma isticmaalo in habka wareejinta. Dhibaatada lagu xallin karaa iyadoo dib u dhiska dib files si ay noqon karaan in qaab asalka sida ay ahaayeen. Mid ka mid ah in ay raacdaa tallaabooyinka soo socda.
Step1: Dooro Maamul Lugood Library ka dibna laba badhamada muuqan hoos ku qoran doonaa. Dooro dib u dhiska iyo ka dibna isku xiro qalabka.
Step2: Marka qalabka ku xiran iyo Stoke Begovic uu arki karo ku bilaabatay baar ah oo aan Lugood hindiso, ka dibna nuqul ka faylasha ay u Lugood dib u dhiska faylasha
Ka dib markii ay soo socda tallaabooyinka mid diyaar u ah inay tirtirto playlist yahay. Mid ka mid ah bilaabo sababihii playlist ah in la ogaado haddii playlist waa kharriban. Playlist qaarkood ku jira faylasha nuqul, an files la mid ah diyaarin iyo fayl. Marka la falanqeeyo playlist waxaa iskaan doonaa oo u siin natiijada waxa heerka waa playlist kala daadsan oo siin tirada ka soo hadhay oo ah xaddiga faylasha in ay yihiin kala daadsan.
Haddii mid ka mid ka dheregsan yahay falanqaynta u dooran karaan qaladaad ah in lagu soo bandhigi doono ka dibna dooro nadiifinta.
Ka dib nadiifinta playlist mid u baahan kartaa inaad dib u wareejiyo playlist in ay Lugood uu. Inta badan waxay door bidaan in ay ku kaydiso ay music ee Lugood tan iyo markii ay iyaga ka heli kartaa meel walba oo aad u dheer sida ay iyagu heli karaan Lugood.
Dadka intooda badan waxay u muuqdaan in lagu fekero in Lugood laga heli karaa oo keliya by qalabka tufaaxa. Hadda, qof walba heli karo Lugood iyo tan iyo qalabka ay android oo ay qabtaan shaqooyin ka waxaa lagu sameeyaa ka iPhone ama buug Marc. Mararka qaar ka mid ah la kulmi kartaa dhibaato ama khaladaad saamaynaya qabadka qalabka, waxaa lagu talinayaa in aad hesho kaalmo farsamo.
> Resource > Lugood > 3 talooyin aad u baahan tahay in aad ogaato ka hor inta aadan tirtirto maktabadda Lugood aad